मास्कले कसरी छेक्छ कोरोना ? विशेष सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाब « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Breaking News » मास्कले कसरी छेक्छ कोरोना ? विशेष सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाब
मास्कले कसरी छेक्छ कोरोना ? विशेष सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाब
काठमाडौं । विगतमा धुलो धुँवाबाट बच्न लगाइने मास्क अहिले हरेकका लागि अनिवार्य प्रयोगको साधन जस्तै बनेको छ । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस बिरूद्धको लडाईमा अनुहारको प्रतीक बन्ने गरेको छ, मास्क ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगै हरेक देशका सरकारले कोरोनाबाट बँच्न मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न सुझाब दिइरहेका छन् । कोरोना भाइरसबाट जोगिन एन नाइन्टि फाइभ र मेडिकल मास्कहरूसँगै कपडाका माक्सहरु समेत प्रयोग भइरहेका छन् । तर माक्स लगाउँदा निश्चित मापदण्ड र बिधिको ख्याल आम उपभोक्ताले गरेको पाइदैन । जनस्वास्थ्य बैज्ञानिक डा. समिरमणि दीक्षित नाइन्टि फाइभ सबै भन्दा पहिचान योग्य र प्रभावकारी मास्क रहेको बताउँछन् । कम्तिमा ९५ प्रतिशत साना कणहरू रोक्ने भएकाले नै यसको नाम एन नाईन्टि फाइब राखिएको उनी बताउँछन् ।
अन्य सर्जिकल मास्कहरुले ६० देखि ८० माइक्रोनसम्मका साना कणहरूलाई फिल्टर गर्ने भएकाले राम्रोसँग लगाउँदा कोरोना भाइरसको फैलावट रोक्ने जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । माक्सले कसैले खोक्दा र हाछ्ँयु गर्दा समेत जीवाणुहरु रोक्ने विश्वास गरिएको छ । तर जनस्वास्थ्यविद्हरु नाक पुरै छोप्नेगरि मिलाएर लगाइएको माक्सले मात्रै जोखिमबाट बचाउने बताउँछन् । बारम्बार माक्स खोल्ने लगाउने, लगाउँदा समेत नाककाृे पुरै भाग नछोप्ने जस्ता कमजोरीले माक्स प्रयोग गर्नेहरुमा समेत जोखिम बढाएको पाइएको छ ।
हातले कुनै जोखिमयुक्त बस्तु छुने अनि त्यही हातलाई डिसईन्फेक्सन नै नगरि माक्स खोल्ने लगाउने नगर्न, नाकको पुरै भाग ढाकेर जिवाणु रोक्नेगरी लगाउन विज्ञहरुले सुझाब दिएका छन् ।